Real Madrid ma u qalantay guushii ay xalay ka gaartay Barcelona?….(Gerard Piqué ayaa kaaga jawaabaya) – Gool FM
Real Madrid ma u qalantay guushii ay xalay ka gaartay Barcelona?….(Gerard Piqué ayaa kaaga jawaabaya)
Byare April 3, 2016
(Catalonia) 03 Abriil 2016. Daafaca Barcelona Pique ayaa ku dhaqsaday inuu ammaano bandhigii Real Madrid kaddib markii ay 2-1 uga adkaadeen kooxdiisa ciyaartii xalay ka dhacday Camp Nou, wuxuuna dareensanaa in kooxda Madrid ay aad uga fiicnaayeen 20-kii daqiiqo ee dambe.
Inkastoo ay jirtay in daafaca reer Spain uu hogaanka u dhiibay Barca bilowga qeybtii labaad ee ciyaarta, Real Madrid ayaa si xarageysan ugu soo jawaabtay goolal ay kala dhaliyeen Karim Benzema iyo Cristiano Ronaldo.
Pique kama uusan xishoon inuu dusha u rito masuuliyada isla markaana uu siiyo kooxda Zidane ammaanta ay u qalmeen.
“Ma aynaan garanayn sida looga faa’iideysto ninka aan dheereyn,” Pique ayaa sidaa yiri. “Xitaa shantii daqiiqo ee ka horreysay kaarkii casaa ee Sergio Ramos waxaan bilownay inaan lumino kontoroolka.
“Waa muhiim inaan baranay sida loo guul darreysto. Waxay ahaayeen guuleystayaal sax ah, waa inaan horey u dhaqaaqnaa iminka isla markaana diirada saarnaa kulanka Aletico Madrid, weli boos fiican ayaan ku jirnaa dhammaan saddexda tartamo.”.